Jawaari | News From Somalia
Tag Archives: Jawaari
Re: Robbery victims assisted by thieves. Abdulkadir Osman “Aroma”
Abdulkadir Osman “Aroma” – In the aftermath of Second World War, in a meeting held on 24th October 1945 in San Francisco, the Charter of United Nations Organization was finalized and countries liberated from the AXIS Forces were named “Occupied Enemy Territories” and they were recognized as existing countries.
01/04/1950 UN established in Somalia Trusteeship, under Italian administration. Known as “AFIS”
Mid 1950 USA opened liaison office as Consulate in Mogadishu.
Late 1950 Trusteeship administration granted drilling concessions to two American Oil Corporation: “Sinclair and Rogers”
From 1950-2013, except ambiguous Peace Corps agenda in 1960s and yellow maize dumping, plus millions of dollars channeled through the UN agencies, the few US funded useful projects (useful to the public) that ever USA undertook in Somalia are four:
Training Teachers Institute known LAFOLE in Afgooye
West wing extension of Kismayo Port
Water installation in North Mogadishu known Eel-Arfit Wells
Extension farms project in Afgooye……
Banaadir News Network.
Coming Soon this Film,InshaALAH.
MOQDISHO IYO MOOSHINO:-Mooshin ma lagu ridi karaa Xukuumada Tabarta Yar ee Xasan Gurguurte?
Mooshin ka dhan ah Xukuumada Soomaaliya ayaa ka socda magaalada Muqdisho, iyadoo shirar gaar gaar ah iyo xod xodasho badan ay ka dhex socoto Baarlamaanka Mahiiga gudihiisa, kaasoo lagu xoojinayo Mooshinka.
Sida ay sheegayaan wararka mooshinkan ayaa waxaa ilaa iyo hada saxiixay in ka badan 130 xildhibaanada Barlamaanka Mahiiga, kuwaasoo awood u siineysa inay Gudoonka baarlamaanka horgeeyaan mooshin miisaankiisa culus yahay.
Qaar ka mid ah Hotelada Muqdisho ayaa ka socda shirarka looga arrinsanayo mooshinada, waxaana wararka qaar sheegayaan inuu bar bar socdo mooshin kale oo ka dhan ah Gudoonka Baarlamaanka.
Wararka qaar ayaa sheegaya in magaalada Nairobi ay si la mid ah uga socoto ololahan ka dhanka ah Xukuumada.
Mid ka mid ah Xildhibaanada baarlamaanka oo la hadlay Wariyayaasha ayaa sheegay in habeen iyo maalin hoteleada ay ka socdaan shirar ku saabsan arrintan, isla markaana ay bar bar socoto balan qaadyo Xildhibaanada loo sameynayo, laguna soo jiidanayo.
Ololahan ka dhanka ah Xukuumada ayaa waxaa horboodaya Xildhibaano ku caan baxay abaabulka barnaamijyada mooshinada, waxaana arrintan ay noqotay durba hadal heynta ugu badan ee ka taagan magaalada.
War shalay si wada jir ah uga soo baxay Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxay kaga digeen mooshinadan oo si xowli ku socda, isla markaana ku baaqay in aan baarlamaanka laga dhex abuurin kala qeybsanaan.
Waxaa maanta aad u qeyliayay kuwa lacagta shubto waa odyaasha sheegta inay wakiil ka yihiin Beelaha Hawiye, oo mudooyinkan danbe dab ka hurinayay dadka Soomliyeed dhexdooda,waxayna si toos u difaaceen saacid Shirdoon oo Mooshin laga keenay.
Khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay madaxda DF-ka kaasi oo ku aadan dhanka maamulka iyo dhaqaale lalunsaday,waxaa beenoobay balan qaad uu bilo ka hor bixiyay xasan sheekh oo ahaa “aniga iyo R/wasaaraha isma khilaafi doono”.
Khilaafka u dhexeeya Saacid iyo Xasan Sheekh ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii xoogeysanayay,socdaal uu Saacid ku maray qaar katirsan gobolada dalka ayaa ka careysiisay xasan sheekh,madaxda DF-ka ayaa caan ku ah in ay iska geeyaan mooshinno.
MAQAAL-Fadeexadda Federalka Qore: -Maslax Ilkacase.
Posted on May 6, 2013 by Voice Of Somalia Standard
بسم الله, الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون. اما بعد: ايها المسلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Aqristayaal maqaalkan ma ahan mid aan uga sheekeynayo dhammaan dhibaatooyinka federalku leeyahay iyo saameyntiisa, ha yeeshee oo kaliya waxaan ku eegi doonaa, hadal aan maalin walba ka maqalno afafka madaxda dowladda Federalka iyo gaalada ku shaqeysata kaasoo ah “Shacabka gobol kasta iyaga ayaa xaq u leh in ay doortaan hogaankooda”.
Runtii aad baan u yaabay marki igu horeysay ee aan madaxda dowladda iyo gaalada kale ka maqlay hadalkan, wuxuuna i dareensiiyay caqli darrida kufaarta iyo qafladda aan ku jirno.
Waxaa jirta qaacido oraneysa “dowladi waxa ay dooneyso in lagu dhaqmo waa in ay iyadu u bilowdaa shacabka”. Haddaba marka reer galbeed iyo Xassan Sheekh Maxamuud leeyihiin shacabka iyaga ayaa xaq u leh doorashada maamulkooda, horta, yaa iyaga doortay?.
Yaa Mareykan iyo Yurub u doortay in ay baddeena xaalufiyaan, sun ku daadiyaan, barigana calooshood u shaqeystayaal usoo diraan?.
Qaramada midoobay iyo Mareykan ma annaga ayaa u dirsanay in ay dowlad noo sameeyaan, ma innaga ayey na matalaan?.
Xassan Qoorgaab marka uu leeyahay shacabka gobolada iyaga ayaa dooranaya maamulkooda, yaa doortay isaga, sideese ku helay xilka madaxweyne ee uu sheeganayo?.
Halkaas waxaa inooga cad in gaalada iyo gaala raacyadu inagu ciyaarayaan, marka ay arkeen in wax walba nalaku dayi karo.
Anigu waxaan oran lahaa Xassan Gurguurte iyo micigiisaba, haddii ay dhab idinka tahay in ummadu ay u madax bannaanaato maamulkeeda is casila oo gaalada ka saara wadanka si shacabku aayihiisa uga tashado una doorto cidda uu doonayo.
Haddii ay dhab idinka tahay in ummadu horumarto, ka hor wareega oo u madax bannaaneeya dinteeda iyo caqiidadeeda aad dagaalka ku heysaan.
Ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay, waxaa qootiina saran mididii la idinku gawrici lahaa, taasoo ah federal.
Annagu waxaan nahay ummad muslim ah, ehel iyo qaraabo isu wada ah oo xoolohoodu isla daaqaan, sidaa darteed waxa hadda la inoo soo wado, waa in qabiil walba loo sameeyo xuduud, taasoo keeneysa dagaal sokooye iyo tafaraaruq ku yimaada ummada muslimka ah si ay u fufudaato in nalooka soo taliyo magaalada Adis-ababa.
Xassan Sheekh Maxamuud ayaa aad ugu cel celiyay arinta xuduud u sameynta qabaa’ilka xilli uu khudbad u jeedinayay baarlamaaka federalka ah asbuucii tagay.
Ugu dambeyntii walaalayaal duulaanka dulmiga ah ee nalagu soo qaaday waxaan uga hor tagi karnaa in qof walba oo inaga mid ahi is xilqaamo kaalintiisana kasoo boxo.
Taariikh ayaa qormeysa wadankana wuxuu u baahanyahay difaac, haddii kale waxaa cadaabka Alle inoogu darsami doona in caruurteena aan gumeysi uga tagno, iyaguna nasoo habaaraan.
Nabigeena CSW wuxuu inoo sheegay inaaney ummadu ka baxayn dulliga illaa ay jihaado, jihaadku waa wadada dambi dhaafka, waa wadada jannada, waa wadada ciziga, waxaan ku heleynaa nasri ama shahaado, haddaan ikhlaas la nimaadno.
Qore: -Maslax Ilkacase.
DHAGEYSO:-“Badda Soomaaliya Beec ma aha” (Somalia is NOT for Sale): Prof Dalxa.
Inj. Idiris “baaxadda badda Soomaaliya cabbir ahaan (inta ay xeebta ka durugsan tahay) waxay u dhigantaa masaafo u dhaxaysa Muqdisho iyo Garbahaaray (oo isu jira 377 km), waxaana la rabaa masaafada intaas leeg in lagu soo koobo masaafo ka sokaysa Muqdisho iyo Afgooye.
Qamar Haashim “Waxaa dhac lagu hayaa badda Soomaaliya iyo Khayraadkeeda, waana arrin muddo la soo diyaarinayey oo xitaa lagu diyaariyey xafiisyada Turkiga – Tan kale Ingriiska iyo Turkiga xiriir dheer ayaa ka dhaxaysa kaas ku salaysan dagaalkii adduunka, waxaana jira shirkado shidaal oo ay wada leeyihiin Ingriiska iyo Turkiga…
Waraysi iyo falanqayn ay baahisay Idaacada Alfurqaan ee aadka looga dhagaysto Muqdisho ayaa looga hadlay boobka lagu hayo Badda Soomaaliya, waxaana waraysiga ka qayb qaatay Xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa oo jooga Muqdisho, Qamar Haashim oo Joogta France iyo Injineer Idiris Xasan Faarax oo ku sugan dalka Finland.
Prof. Dalxa oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya – kana mid ahaa guddoonkii baarlamaankii hore ee diidey in badda Soomaaliya la dhaxal wareejiyo – ayaa si kulul u sheegay in dhulka Soomaaliya uusan iib ahayn ama beec ahayn.
Waraysigii Radio Alfurqaan ka dhagayso HALKAN ama Halkan.
Injineer Idiris Xasan Faarax ayaa asaguna sheegay Badda Soomaaliya inaysan ahayn 12 Mayl oo xitaa ay ka badantahay 200 oo Mayl, balse ay tahay 200 Mayl-badeed (Nautical Miles*) oo u dhiganta 370.4 kiilo mitir. Waxana uu yiri waa in la fahmo baaxadda badda cabbir ahaan (inta ay xeebta ka durugsan tahay) in ay u dhiganto masaafo u dhaxaysa Muqdisho iyo Garbahaaray, waxaana larabaa masaafada intaas leeg in lagu soo koobo masaafo ka sokaysa inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye.
Fogaanta u dhaxaysa Muqdisho iyo Garbahaarey waa 377 km
Fogaanta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye waa 30 km.
Injineer Idiris ayaa tibaaxay in Ummadda Soomaaliyeed laga doonayo inay difaacaan una istaagaan ka hortagga qorshaha guracan ee ka dhanka ah Badda Soomaaliya.
Qamar Haashim ayaa dhankeeda sheegtay Dowladdaha Norway, Ingariiska, Fransiiska iyo Turkiga inay kaalin weyn ku leeyihiin boobka lala damacsanyahay badda Soomaaliya.
Qamar Haashim ayaa Tusaale usoo qaadatay Shirkado shisheeye ah oo qaar kamid ah ay leeyihiin dalalka ay xustay inay haddaba faraha kula jiraan khayraadka Dalka Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa oo kamid ah xubnaha Baarlamanka Federaalka oo isna qeyb ka ahaa Falanqeynta ayaa sheegay inay ka warheleen qorshaha socda laakin baarlmanku aysan ogolaan doonin Badda Soomaaliya in lagu soo kobo 12 Mayl.
Halkan Ka Dhageyso falanqeynta badda Soomaaliya
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa wadanka Ingriiska ayaa shaaciyay in Uhuru oo maxkamadda aduunku baadi goobayso lagu casuumay magaalada London inuu yimaado dhowaan.
Casuumaadda dowladda Britain ay u fidisay Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay inay ku qotonto sidii uu kaga qayb gali lahaa shir dhowaan halkaasi ka dhacay oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayo kaasi oo ay martigelinayso islamarkaana agaasimayso xukuumadda David Cameron.
Guardian waxaa uu qoraalkiisa ku sii daray in sababta shirkaasi looga qayb gelinayo dowladda Kenya ay tahay kadib markii xukuumadda Britain ay u aragtay arinkaasi mid muhiim u ah qorshaha Soomaaliya ay ka damacsantahay.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Dowladda Ingriiska ayaa dhankiisa sheegay in xukuumadda London ay Kenya u aragto mid dhig wanaagsan la ah Soomaaliya islamarkaana ay mudantahay in lala socodsiiyo waxna laga weydiiyo sida Soomaaliya laga yeelayo.
Dhanka kale ilo ku dhow xafiiska Uhuru Kenyatta ayaa The Guardian u sheegay in masuulka ugu sareeya Kenya uu dhowaan u duuli doono magaalada London ee caasimadda wadanka Britain.
Dowladda Kenya ayaa qayb ka ah ciidamada shisheeye ee ay taageeraan dalalka reer galbeedka ee ku duulay Soomaaliya iyadoo ciidamo diyaarado iyo gaadiidka gaashaaman u dirtay Soomaaliya si ay Shareecada Islaamka u dumiyaan.
Kenya naf ahaan waxay Soomaaliya ka doonaysaa dhul iyadoo aaminsan inay dhulka jubbooyinka juqraafi ahaan leedahay,waxaana laga yaabaa in ka qeyb galkeeda shirka London uu salka ku hayo sidii dhulkaasi loogu xalaaleyn lahaa islamarkaana xukuumadda Xasan Sheekh ee la waardiyeeyo loogu qancin lahaa.
Soomaaliya ayaa in mudo ah gacmaha shisheeye lagu kala goynayay iyadoo gacanta laga bixiyay dhulka galbeedka Soomaalida Ethiopia, NFD-da Kenya Soomaaliland iyo Puntland waxaana hadda la qorsheynayaa sidii inta hartay loo sii kala jari lahaa.
ISHA WARKA RADIOALFURQAAN.COM
Dardaaran wuxuu ka mid yahay gabayada Sayidka kuwii ugu dambeeyey. Waa dhiirigalin iyo dardaaran isku jira. Daraawiish oo Ingiriis diyaarado ku rusheeyey oo kasoo baxday dhulkii ay ka talin jirtay oo dhan, aadna u niyad jabsan ayuu Sayidku ku dagaalgelinayey. Wali xoogbaan leenahay gaalkana waynu iska dhicin karaa ee dagaalama oo yaan la isu dhiibin gumaysiga ayey dulucdiisu tahay.
“Waa niman Illaahay dadoo, doorshay oo hodoye
Waa niman daboolmoo qalbiga, daabac kaga yaale
Dib wixii u dhici waa waxaan, dooc ka garanayne
Doqonimo darteed waa wixii, iigu diirsadaye
Waa wixii dabaaldegay anuu, gaal isoo dilay
Waa wixii durbaansanahayeen ii, dub nixi hayne
Igu diima aa ama dafarid, igula doodaab
Wuxuu gaalku daayaaba waa, dayrtan maanta ah
Maxay igaga digan saadambuu, siin lasoo degiye”
Wuxuu qeexay in uu isagu u xishay inuu gumaysiga dalka ka saaro, haddii uu maal iyo maamuus kale oo adduunyaad doonayana Ingiriis wax walba inuu diyaar ula ahaa ayuu xusuusiyey kuwii hadalka macno daradda ah usoo dhiibay. Wuxuu sheegay inuu ku dhiman doono jahaadka, diinta iyo koryeelidda kalimadda Alla. Banaadir Post.